စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်: ဆုံမိတဲ့ တနေ့
chocothazin October 2, 2012 at 2:32 AM
မခွဲခွာခင်မှာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖြစ်နိုင်ခဲ့တာကပဲ ကျေနပ်စရာပါကွာ။
အဲလို ညမျိုးပေါ့ လူတွေကို လှည့်စားတာ အနော်ရ။ ခင်တော့ ကြောက်တယ်။း)
ဘိုင်သဝေး အနော့်လက်က ၀တ္ထုရှည်လက် သိလား .. ၀တ္ထုအရှည်ရေးရင် ကောင်းမှာ ..း)) (အဲလိုပဲ လူတွေကို ညာညာရေးခိုင်းနေရတာ :P)
nanny December 16, 2012 at 1:27 AM
How did you practice to write this letter? Do you write directly? I remark.
nanny December 16, 2012 at 1:28 AM